Concours miss princesse, petite princesse et petit prince : Araho an-tsary ny fifanintsanana natao omaly
Tao anaty hafanam-po tanteraka no niatrehan'ireo ankizy ny dingana fifanintsanana voalohany, natao omaly, ao anatin'ilay fifaninana Petit Prince sy Petite Princesse ary Miss Princesse iarahana amin'ny Charm'Elle Beauté.
Feno hipoka an'ireo mpanohana ny ankizy tsirairay ihany koa ny efitrano filanonan'ny Espace Myrah Ambatomaro nandritra izay fifanintsanana omaly izay. Nampiavaka an'iny tontolo androm-pifaninanana omaly iny, ny fomba fianjaikan'ireo ankizy mpifaninana. Fitafiana mpanjaka mantsy no lohahevitra ka samy somebiseby nampihaingo an-janany araka izay azony natao ireo ray aman-drenin'ny mpifaninana tsirairay. Ankoatra izay dia samy nampiseho ny talentany ihany koa ireo ankizy mpifaninana ankoatra ny filatroana nataony, toy ny hira, ny dihy, ny fitendrena zava-maneno, ny haihady.... Araho an-tsary aloha ny fianjaikan'ireo mpanjakakely mahafatifaty nifaninana omaly. Amin'ny alakamisy izao kosa, eto amin'ny Jejoo ihany, no hamantaranao ireo mpifaninana voaray hiatrika ny dingana famaranana... Miara-miasa amin'ny gazety Jejoo kosa moa ny Charm'Elle Beauté ao anatin'izao fifaninana izao.